In lahelo dowlad soomaaliyeed yaa hortaagan , yeeysa gacanteeda ku burburtaa - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka In lahelo dowlad soomaaliyeed yaa hortaagan , yeeysa gacanteeda ku burburtaa
In lahelo dowlad soomaaliyeed yaa hortaagan , yeeysa gacanteeda ku burburtaa
Soomaaliya Markeey xurnimada qaadatay 1960 waxaa loodhisay dowlad dimuqraadi ah, siyaasiintii ugu horeeysay ee talada dalka qabatay waxeey xukunka ku wareejiyeen si nabad galyo iyadoo dalka ka dhacday doorasho sinaan & cadaalad ah.
Soomaaliya wadadii dimuqraadiyada waxeey ka leexatay markii Kaligii Taliye Mohamed Siyaad Bare uu talada xoog ku maroorsaday , inta uu rajiimkaas talada dalka haayay waxyaabaha taariikhda galay waxaa ka mid ah.
In diinta islaamka dagaal lagu qaaday lana beeniyay aayado quraan .
In lalaayo culumo soomaaliyeed oo u gargaaray diintii alle.
In sinaantii & cadaaladii meesha ka baxday.
In xasuuq loogeestay dad soomaaliyeed gobolo kala duwan.
in dhaqaalihii dowlada loorarayo reero gaar ah.
in lalaalay xaqii muwaadinka ee ahaa inuu wax doorto ama ladoorto.
Ugu danbeeyn shacab soomaaliyeed oo is abaabulay ayaa naftoda ku bixiyay in kooxda qaswadayaasha ee dalka xooga ku heestay in la eryo balse nasiib xumo ciil & kalsooni xumo ay abuuray hoggaanka siyaad bare waxaa la isku qabsaday cida qaadaneyso xukunka taaso iyana dalka u horseeday dagaal sokeeye oo hor leh.
Markale oo dib loosoo yagleelay dowlad soomaaliyeed isla markaasna dalku uu ku jiro dagaal 10 sano loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimo & wadajirka umada waxaa markale hadana Soomaaliya kabaabaday qodobo ayka mid yihiin.
In muwaadin Soomaaliyeed loogacan galiyo cadow shisheeye
In Sharuucdii dalka sida dastuurka laburburiyay lagana soo qaaday waxaan jirin.
In hanaanka doorashada dalka ay noqotay mid kushubasho ah .
In sinaantii & cadaaladii adeega dowladnimo laqabyaaladeeyay.
In la isku diray qabaailada soomaaliyeed.
In awooda ciidamada qalabka side loo adeegsaday muwaadiniin aan waxba galabsan.
Haddaba shacabka soomaaliyeed Suaasha ay iswaydiinayaan ayaa ah markasto maxeey tahay cida naga dudumiso dowlad dimuqraadi ineey dalkeena ka dhacdo ?
Suaashaas jawaabteeda waa fududahay , Soomaaliya ineey dowlad hesho waxaa hortaagan beesha mareexaan shalayna siyaasigoda Mohamed siyaad Bare ayaa wadadii sinaanta & cadaalada naga leexiyay maanta siyaasigooda ayaa soomaaliya u horsedi raba dagaal sokeeye.
Dadka Soomaaliyeed ineey jawaab bixiyaan ayaa lobahan yahay ma waxaa ku qanceena in lawaado dowlad soomaaliyeed lawaayo oo ayku burburta gacanta beesha mareexaan siyaasiintooda iimaanka katagay, mise waxaan dhaheynaa walalayaan imaanka alle ha idinsoo celiyo talada dadka soomaaliyeed ka godaan waxaad gashaan & waxaad gudaana waan idin aragnay sidaa aad umaareeyseen dowladnimada .
Hadii shacabka soomaaliyeed aysan banaanka usoo bixin diidin dhaqanka fasahaadka ah oo dowlad duminta ah ay caado ka dhigteen siyaasiinta beesha mareexaan waxaa xaqiiq ah in soomaaliya burburi doonto dib danbe aanlo maqli doonin magac soomaaliyeed waxaana kalifi doono amrkii doorasho ku shubasho ah dalka ka dhacdo 2020 / 2021.
Waqtigii leesku rageen jiray wa dhamaatay wax aan aheyn sinaan & cadaalad maamul dowlad soomaaliyeed kuma soconeeyso aan baadbaadsano dowladnimadeena isla markaasna aanka hortagno in shacabka soomaaliyeed ay isku dilaan aragti siyaasinta beesha mareexaan ee ah iimaan daro siyaasadeed , kaligii talis & xoogis xukun dadweyne una dheer dhac hanti shacab oo lagu dhisto daaro .
Previous articleTalada Afarwarki oo Ethiopia u horseeday burbur & Soomaliyana wadadeeda ayeey heeysa
Next articleShirka Musharaxiinta Xilka Madaxweynaha Oo Goordhow Furmay